Uyadlondlobala owamasiko | News24
ISITHOMBE: thami ka-nkosiIqembu loChwepheshe lishaya ingoma ebhuqu ngoMgqibelo.
INHLANGANO yezokuvakasha i-Ugu South Coast Tourism iqale inyanga yamagugu ngokuba ingxenye yomcimbi waminyaka yonke obizwa ngokuthi Amakhono Heritage Festival
Lomcimbi ogqugquzela amasiko ububanjelwe ezinkundleni zemidlalo zaseBhuqu eBhomela ngoMgqibelo owedlule.
Lomcimbi uqale ngegiya eliphezulu, amaqembu ahlukahlukene eshiyelana inkundla. Abaculi abebeshiyelana inkundla kubalwa kubona Ochwepheshe, Abaluswa, Izidlamhlathi, Bahluphile, Abasebenzi, uNdumiso nabanye abaningi.
UThanda Ncane ongusihlalo we-Ugu Association of Business uthe angathanda ukubona imicimbi ewuloluhlobo idlondlobala ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya.
UMaxwell Mhlongo obeqhamuka ngaphansi kwenhlangano yezokuvakasha uthe ukubonakala kwamakhono amahle ezindaweni zasemakhaya kusho ngokusobala ukuthi baningi manje asebebona ukubaluleka kwezokuvakasha kane nokubamba iqhaza
Uthe ngesikhathi abantu abasha nabadala bezibandakanya ngamakhono abop lokho kusho ukuthi kuzoba nkukhulu ukunotha kulomkhakha.
“Akugcini nje engomeni nasemiculweni ehlukahlukene kodwa sinabantu abaningi asebengene bathi shi kwezeshashalazi kanti futhi iqhaza elibanjwe ngabasebenzi bezandla libonakala lidlondlobala,” kusho uMhlongo.
“Imicimbi efana nalena iyagqugquzela ukuzimisela, iphinde ivundulule namathalente ekade engaziwa,” kubeka uMhlongo